सोना खटिक - कान्तिपुर समाचार
सोना खटिकका लेखहरु :
जात थाहा पाएपछि ‘तिमी’ !
चैत्र १, २०७६
अहिले सहरवासीले गाउँमा मात्रै विभेद छ भन्छन् । तर, कतिपय घटना हामीले सुनेका/देखेका छौं– सांसद भइसकेका दलितले समेत सहरमा भाडामा कोठा पाएका छैनन् । अरूको कस्तो अवस्था होला ? कोठा खोज्ने बेलामा जात लुकाउनुपर्ने अवस्था यद्यपि छ, सहरमा । जात थाहा पाएपछि विभिन्न बहाना बनाएर कोठाबाट निकालेका कैयौं उदाहरण छन् ।